RIU Hotels & Resorts meghere họtel ọhụrụ abụọ na Maldives
Home » Nkwari akụ na nkwari akụ » RIU Hotels & Resorts meghere họtel ọhụrụ abụọ na Maldives
RIU Hotels & Resorts yinye emepeela ụlọ nkwari akụ abụọ na Maldives. Riu Atoll na Riu Palace Maldivas bụ ụlọ nkwari akụ 4 na 5 n'otu n'otu ma ha dị na Dhaalu Atoll. Hotelslọ oriri na nkwari akụ abụọ ahụ na-enye ndị ọbịa nnukwu ụlọ Indian Ocean.
Luis Riu, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ, na-akọwa na "nke a bụ oge dị mma maka agbụ ahụ, n'ihi na anyị na-arụ ọrụ ịmepe ụlọ nkwari akụ na Maldives kemgbe ihe karịrị afọ asaa. Openmepe ụlọ oriri na nkwari abụọ n'otu oge, ebe m meriworo ihe ịma aka dị egwu na nke ọrụ njegharị n'ihi ọnọdụ ala ha, ọ bụ m ka nrọ na-emezu na nke onwe m na nke ọkachamara. ”
N'ime oru ngo a, ụlọ ọrụ ahụ ahapụghị ihe ọ bụla na ohere. Usoro a gụnyere ọrụ siri ike nke malitere na mbido 2017 ma were ihe karịrị afọ abụọ iji mepụta ebe ntụrụndụ abụọ a. Hotelslọ oriri na nkwari abụọ a, na agwaetiti abụọ dị iche iche, jikọtara site na nnukwu ije ụkwụ 800-mita n'elu mmiri. Sulọ iri abụọ na asaa n'elu mmiri Riu Palace Maldivas dị n'akụkụ abụọ nke ụzọ a.
Riu Atoll dị na agwaetiti Maafushi. Riu Palace Maldivas dị na agwaetiti agbata obi Kedhigandu, nke bụkwa nke onwe.
Délọ nkwari akụ nke ụlọ nkwari akụ na-asọpụrụ gburugburu ebe ha nọ, na-ahọrọ ihe ọkụ dị ka osisi ma na-agbakwunye ụfọdụ iko iko iji nye ohere nke ohere na iji mee ka ìhè na ihu igwe kachasị. Ha gụnyekwara ọtụtụ oghere ghere oghe nke gosipụtara ọmarịcha echiche ị na-enweta n'ebe ọ bụla n'agwaetiti ahụ. Ejiri mara mma nke ájá na aquamarine nke na-eme ka mmiri dị n'oké osimiri na ime ụlọ ya, kamakwa ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ pụrụ iche nke a pụrụ ịhụ na ebe ezumike a dị omimi ma dị egwu.